भैरव अर्थात भयानक, भगवान् भैरवका केही रहस्य ! - Digital Khabar
भैरव अर्थात भयानक, भगवान् भैरवका केही रहस्य !
By डिजिटल खबर Last updated Sep 4, 2021
१९ भदौ, काठमाडाैं । भैरवको अर्थ हो जसले डर हटाउँछ र संसार भर्दछ । यो पनि भनिन्छ कि भैरव शब्दको तीन अक्षर ब्रह्मा, विष्णु र महेशको शक्ति हुन्छ । भैरवलाई शिवको गण र पार्वतीको अनुयायी मानिन्छ । भैरव हिन्दु देवताहरुको बीच धेरै महत्त्वपूर्ण छ । उनलाई काशीको कोतवाल पनि भनिन्छ ।
भैरवको उत्पत्ति : भैरव शिवको रगतबाट उत्पन्न भएको उल्लेख गरिन्छ जुन पछि दुई भागमा विभाजित भयो । पहिलो बटुक भैरव र दोस्रोकाल भैरव ।
मुख्यतः दुई भैरव, एक काल भैरव र अर्को बटुक भैरवको पूजा गर्ने प्रचलन छ । पुराणहरुमा भगवान् भैरवलाई असितंगा, रुद्र, चन्द, क्रोध, मनमट्टा, कपाली, भीषण र सम्हार र नामले पनि चिनिन्छ । भैरव, भगवान् शिवको पाँचौं अवतार, भैरवनाथ पनि भनिन्छ । नाथ सम्प्रदायमा उनीहरुको पूजाको विशेष महत्त्व छ ।
लोक देवता : भगवान भैरव लोक जीवनमा भैरु महाराज, भैरू बाबा, मामा भैरव, नाना भैरव आदिको नामबाट परिचित छन् । यी धेरै समाजको कुल देवताहरु हुन् र उनीहरुको पूजा गर्ने अभ्यास पनि फरक छ, जो एक औपचारिक हैन तर स्थानीय परम्पराको हिस्सा हो । यो पनि उल्लेखनीय छ कि भगवान भैरव कसैको शरीरमा आउँदैनन् ।
पलिया महाराज : भैरु महाराजको नाममा सडकको छेउमा राखिएको धेरैजसो बोटल वा ठाउँहरु वास्तवमा ती मृत आत्माहरुको ठाउँहरु हुन् जो ती ठाउँमा दुर्घटना वा अन्य कारणबाट मरेका छन् । यस्तो स्थान भगवान भैरवसँग कुनै सम्बन्ध छैन । उक्त ठाउँमा पूजा गर्न अनुमति छैन ।
भैरव मन्दिर : भैरवको प्रसिद्ध, प्राचीन र चमत्कारिक मन्दिरहरु उज्जैन र काशीमा स्थित छन् । उज्जैनमा काल भैरव र लखनउमा बटुक भैरवको एक मन्दिर छ ।
भैरव मन्दिर काशी विश्वनाथ मन्दिरबाट डेढ देखि दुई किलोमिटरको दूरीमा स्थित छ । तेस्रो, उज्जैनको काल भैरवको प्रसिद्धिको कारण पनि ऐतिहासिक र तांत्रिक हो ।
नैनीताल नजिकै घोडा खाडको बटुक भैरव मन्दिर पनि धेरै प्रसिद्ध छ । यहाँ भैरव गोलु देवताको नामबाट प्रसिद्ध छ । यसबाहेक, शक्तिपीठ र उपपीठ नजिकै भैरव मन्दिरहरुको महत्व मानिन्छ ।
काल भैरव : काल भैरवको उपस्थिति प्रदोष कालमा मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमीमा भयो । यो भगवानको साहसी युवा रूप हो । माथिको रूपको पूजा दुश्मन, संकट, अदालतको मामलामा विजयबाट स्वतन्त्रता दिन्छ ।
साहस एक व्यक्तिमा छ । एक व्यक्ति सबै प्रकारको डरबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दछ । काल भैरव शंकरको रुद्रावतार मानिन्छ । काल भैरव को पूजाको लागि मन्त्र हो । ओम भैरव नम ।
बटुक भैरव : त्यो हो, यी भैरव देवताहरु को पूजा, बटुक को नाम बाट प्रसिद्ध, देवताहरुद्वारा पूजा ब्रह्मा, विष्णु, महेशदी, एक कल्पवृक्ष जस्तै फलदायी छ ।
बटुक भैरव भगवानको बच्चा रूप हो । उनलाई आनन्द भैरव भनेर पनि चिनिन्छ । कोमलको रूपको पूजा चाँडै फलदायी हुन्छ । यो काममा सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ ।
भैरव तन्त्र : योग जसलाई समाधि पद भनिन्छ, भैरव तन्त्रमा भगवान शिव भैरव पद वा भैरवी पाडा प्राप्त गर्न को लागी देवी को अगाडि ११२ विधिहरु उल्लेख गरेका छन्, जसको माध्यमबाट उक्त राज्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
शनि भैरवको पूजा गरेर शान्त हुन्छ : शनिको क्रोध भैरवको मात्र पूजा गरेर शान्त हुन्छ । पुराण अनुसार भद्रपद महिना भैरव पूजाको लागि उत्तम मानिन्छ ।
उक्त महिनाको आइतबारलाई ठूलो आइतबार मान्दै उनीहरु व्रत बस्छन् । जुवा, सट्टा, रक्सी, ब्याज, अनैतिक कार्य आदि जस्ता बानीहरुबाट टाढा रहनुहोस् ।
भैरव चरित्र : भगवान भैरव तान्त्रिक र अन्य उपासकहरुलाई माफ गर्नुहोस् जो भैरवको चरित्रको एक भयानक चित्रण गरेर र घृणित तान्त्रिक कार्यहरु गरेर जनतामा डर र उपेक्षाको भावना पैदा गर्दछन् । वास्तवमा भैरवको रूपमा उनी चित्रित गरिएको छैन ।
महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी जरुरी’
म्याद गुज्रिएको चियापत्तीबारे थप अनुसन्धान सुरु
बर्षा कम भएपनि पहिराेकाे जाेखिम कायमनै
सन्दर्भ रेडक्रस स्थापना दिवस : ‘जहाँ दुःख त्यहाँ रेडक्रस’
भर्चुअल श्राद्ध किन गर्नु हुँदैन हाम्रो वैदिक शास्त्रले के भनेको छ!
हास्यव्यङ्ग्य साहित्यका विराट प्रतिभा भैरव अर्यालको ८६ औं जन्मजयन्ती: साहित्यिक…
डिजिटल खबर ६ आश्विन २०७८, बुधबार १८:५५
राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएपछि ब्राजिलका स्वास्थ्य मन्त्री…
६ आश्विन २०७८, बुधबार १७:५९